जब काठमाडाैँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले एकोहोरो शंख फुके… – Rajdhani Daily
जब काठमाडाैँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले एकोहोरो शंख फुके…
काभ्रेपलाञ्चोक । काठमाडौँ विश्वविद्यालयकाको केन्द्रीय कार्यालय धुलिखेलमा बुधबार ९ बजे ‘एकोहोरो शंख’ बजेसँगै स्थानीयको ध्यान शंख तिर केन्द्रीत भयो । केही स्थानीय शंख बजेतिर दौडिए तर त्यहा कुनै भवितव्य भएको थिएन काठमाडाैँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुले आन्दोलन गरेर, ‘एकोहोरो शंख’ बजाएका रहेछन् । हिन्दु संस्कारमा मान्छेको निधन भएसँगै दाहसंस्कार गर्न घाटमा लिएर जाँदा एकोहोरो शंख बजाइन्छ ।
आफूहरु अन्तिम अवस्थामा पुगेर मात्रै ‘एकोहोरो शंख’ बजाउन बाध्य बनेको काठमाडौँ विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका सल्लाहकार प्रा.डा बिभुती रञ्जन झाले बताए । केयूमा १४ दिनदेखि त्यहाँका प्राध्यापकहरुले चार बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरेका छन् । उनीहरुको आन्दोलनमा केयूका कर्मचारी, स्थानीय नागरिक र विद्यार्थी संघ संगठनले समेत साथ दिएका छन् । केयूका उप–कूलपति,रजिष्ट्रार र डिनको कार्यालयमा प्राध्यापकहरु तालाबन्दी गरेको बुधवार १४ दिन पुरा भएको छ । तालाबन्दीले संचालन भैरहेका परिक्षाहरुलाई प्रभावित पारेका छन् ।
प्राध्यापकहरुले काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन २०४८ मा भएका विभेदकारी प्रावधान हटाई सम्बन्धित सबै पक्षको सहभागितामा संशोधन गर्नुपर्ने, प्राध्यापक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, लामो समय एउटै पदमा कार्यरत करार/अस्थायी प्राध्यापक तथा कर्मचारीसम्बन्धी संशोधनमा गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । तर त्यसमा प्रशसनले वास्ता नगरेको आरोप उनीहरुको छ ।
प्राध्यापक संघले चार बुँदे माग राखेर गरेको आन्दोलन दैनिक रुपमा फरक–फरक रुपमा हुँदै आएको छ । बुधबारको आन्दोलनमा प्राध्यापकहरुले एकोहोरो शंख फुकेर विरोध जनाएका छन् । केयू प्रशासनले माग नसुनेपनि माग सम्बोधन गराउने उदेश्यले प्राध्यापकहरुले एकोहोरो शंख फुकेर विरोध जनाएका हुन् । बुधवारको आन्दोलनको उदेश्य आफ्ना माग नसुन्ने प्रशासनले कान सुनोस् भनेर शंख बजाएर आन्दोलन गरेको प्राध्यापक गरिएको संघका सल्लाहकार प्रा.डा बिभुती रञ्जन झाले बताए ।
यसअघि ताली पिटेर, सिठ्ठी फुकेर आन्दोलनमा सहभागी भएका प्राध्यापकहरुले बुधवार भने शंख फुकेर विरोध गरेका हुन् । केयू प्रशासनले साउन ३१ गते प्राध्यापकहरुको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै वार्ता समिति बनाएपनि जुनियरहरुसँग वार्ता नगर्ने अडानमा प्राध्यापक देखिएका छन् ।
वार्ता समितिमा स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका डिन प्रा डा. विजय केसीको संयोजकत्वमा दुई सदस्यहरुमा स्कुल अफ एजुकेसनका प्रा. डा बालचन्द्र लुइँटेल र प्रशासकीय प्रमुख मुकुन्द उपाध्याय रहेको स्कुल अफ साइन्सका डिन प्रा. डा कन्यैया झाले जानकारी दिए ।
आन्दोलनको बिषयमा कुनैपनि चासोनै नलिइकन केयुको उपकुलपति प्रा.डा रामकण्ठ मकाजु श्रेष्ठसहितको १० जनाको टोली कोरिया र एक जना भारतको भ्रमणमा रहेको आरोप प्राध्यापक संघको छ । केयूमा ताला लागेको बिषयमा केयू प्रशासनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रे, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेमा जानकारी समेत गराएको छैन ।
विगतमा प्राध्यापक संघले गर्ने गरेको आन्दोलनमा प्राध्यापकहरु लामो समयसम्म नटिक्ने देखिएकाले केयू प्रशासनले यो आन्दोलनमा समेत धेरै चासो दिएको छैन । काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन २०४८ मा भएका विभेदकारी प्रावधान हटाई सम्बन्धित सबै पक्षको सहभागिता हुनुपर्ने, प्राध्यापक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, नियमित वृत्ति विकास र प्रोत्साहनका सम्बन्धमा आवश्यक नीति नियम निर्धारण गरि लामो समयसम्म एउटै पदमा कार्यरत करार—अस्थायी सेवाका प्राध्यापक तथा कर्मचारीको विषय संशोधन गर्ने तथा विश्वविद्यालयको शौक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएकाले गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि आवश्यक योजना निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्राध्यापक संघसँग सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्राध्यापकहरु आन्दोलनमा छन् ।
Tags: काठमाडाैँ विश्वविद्यालय